Na-emehie, Ndị a bụ 4 Ihe mere Social Media na-emetụta SEO | Martech Zone
Biko anyị nwere ike ịkwụsị arụmụka a? Odi m ka enwere ndi okachamara ndi ozo no na-adighi nma ikwu okwu banyere ndi mmadu n’enweghi nghota. Usoro mmekọrịta bụ usoro nkwalite nke na-ewulite njikọta abụọ yana ịnye gị ohere ịbịakwute ndị na-ege ntị. Achọghị m ka m kpokọta ha niile, mana ọ dị ka ọtụtụ mkpọtụ na-abịa site na ndị ọkachamara SEO - ndị achọghị ịkekọrịta mmefu ego na mgbasa ozi mmekọrịta. O doro anya na ha na-emere onwe ha nnukwu nsogbu.
N'ezie, post a bụ ihe atụ zuru oke. M nwere na-elekọta mmadụ alerts Mbido web na kpaliri anyị mgbe e nwere ụfọdụ kwuru banyere mgbere, usoro na teknụzụ ka anyị nwee ike ide banyere ha. M na-enyocha saịtị ndị ahụ ma na-edozi ọdịnaya ahụ maka ndị na-eso ụzọ anyị. Na nke a, na infographic n'okpuru a hụrụ na otu nke ndị alerts. Mana ka m na-agụ isiokwu ọzọ na saịtị, gosipụtara ngosipụta nke infographic n'okpuru ebe a na ngalaba posts ndị metụtara ya. M wee gụọ infographic ahụ wee chee na ọ dị mma. Agaghachiri m na Google iji chọpụta ebe infographic ahụ dị Tinye SMO, ma chọta infographic, Kedu otu SEO na Social Media si emetụta weebụsaịtị gị?.
Yabụ, Mgbalị mmekọrịta mmadụ na ibe nke Submitedge SMO iji kwalite ozi ha na-enweghị isi dugara m na-akwalite ha na ịnye backlink na ibe ha n'isiokwu akọwapụtara maka bailiwick ha. Ọganihu! A sị na ha anaghị ekekọrịta mbọ ha na soshal midia, agaraghị m achọta ha! Tohapụ ikwu eziokwu na ọ bụrụ na ha edeghị ọkwa ọ bụla metụtara ihe ọmụma a, ọ nweghị ụzọ ọzọ m gaara esi chọta ha.
Ebe nrụọrụ weebụ gị zuru ezu dabere na SEO na Social Media. Akụkụ abụọ ahụ dị ka ụkwụ abụọ na-enyere ebe nrụọrụ weebụ aka ịga n'ihu site na nkwụsị. Otú ọ dị, ihe ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru ga-eme ka ị mara uru nke Social Media na SEO na ọkwa gị.
Kedu otu SEO na Social Media si emetụta weebụsaịtị gị?
Njikọ nwere ike - ihe atụ m n’elu bụ ihe akaebe zuru oke na nke a na-arụ ọrụ. Gbasa ụwa na mmekọrịta mmadụ na ibe gị na-akwalite ọdịnaya gị na ndị na-ege ntị nke ukwuu, na-eme ka o kwe omume na ndị ọzọ ga-ekerịta ya. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe infographic, ikekwe ị mụbara ohere gị nke ọma!
Personalization - Enwetụbeghị mgbe m chere banyere nke a mana ebe ọ bụ na nsonaazụ ọchụchọ ahaziri maka onye ọ bụla banyere na Google, wee dee ya maka onye ọ bụla na-abụghị, nke a dịgasị iche na nsonaazụ n'ezie nke enyere onye ọ bụla. Ndị ọrụ mmekọrịta metụtara mmekọrịta na-ewulite profaịlụ nke ahaziri iche na nsonaazụ ndị a nwere ike dakọtara mbọ gị - na-enye gị mmụba, akọwapụtara nke ọma.
Ajuju Ajuju Ajuju - Ọzọkwa, ịpụ n’ebe ahụ n’ụwa nke mmekọrịta mmadụ na ibe gị na-ewuli aha gị ike ịtụkwasị obi, ikike, na mmekọrita. Amalite iji nweta akara ngosi gị ma ọ bụ chee ihu na ndị na-ege ntị nke ọma ma mmata ga-eme ka ndị na-azụ gị bịakwute gị. Blog a na iko m jọrọ njọ bụ ihe atụ zuru oke! Ọ bụ ya mere ihu m ji nọrọ ebe niile - ma ọ masịrị gị ma ọ bụ na ịchọrọ;).
Ihe ngosi akara - Site na ngbanwe algorithm na ọganihu na algorithm nke Google, ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ochie SEO bara uru na-elelị mmetụta nke amaokwu na-egosi ịdị mkpa nke njikọ yana; n'ikpeazụ, ogo. Aha aha gị, aha ngwaahịa, aha onye ọrụ, adreesị na nọmba ekwentị niile dị iche iche data. Nweta ha ebe ahụ na saịtị niile na-egosi na ịdị adị na ikike gị.
Ọ masịrị m na ndị ọkachamara ọchụchọ nke oge a na-etinye ọdịnaya ma rụọ ọrụ iji gosipụta ọdịnaya ahụ na saịtị mgbasa ozi akwụgoro na nke nwere. Olee otú ha si eme ya? Ọtụtụ mgbe site na atụmatụ mmekọrịta ọha na eze. Chee echiche na nke ahụ… ha na-eji mmekọrịta mmadụ na ibe iji mee ka o nwekwuo ohere na njikọ sitere na ọdịnaya edere ede ma ọ bụ kesaa site na saịtị ndị nwere mmetụta. Hmmm… nke ahụ agaghị ekwe omume site na mgbasa ozi mmekọrịta? Ee, ee, ọ bụ.
Tags: mmetụta na-elekọta mmadụsearch engine njikarịchaọchụchọ ahia azumọchụchọ ogochọọ na mmekọrịta mmadụ na ibe yaAseo na elekọta mmadụatụmatụ aghụghọseo na-elekọta mmadụelekọta mmadụ na ọchụchọelekọta mmadụ na seommekọrịta mmadụ na ibe yausoro mgbasa ozi mmekọrịtaatụmatụ mmadụmmekọrịta mmadụ na ibe yaelekọta mmadụ na seonyefee smo
Jenụwarị 8, 2015, elekere 5:17 nke abalị
Ọ dị mma Doug. Nke ahụ kwuru, echere m na ị na-ejikọta echiche abụọ dị iche iche na social re SEO (na m maara na ị bụghị n'ezie ma ọ bụ blog ka anyị nwee arụmụka. Gịnị ọzọ bụ ha maka?):
1. Ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike iduga n'ihe ndị bụ ọkwa ọkwa
2. Ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ "ihe dị n'ọkwa"
Ekwenyere m na #1. Ekwetaghị m na #2 belụsọ maka ụfọdụ mmemme Google+ nwere oke oke.
Jenụwarị 8, 2015, elekere 5:23 nke abalị
Ekwenyere Andrew kpamkpam! M kwesịrị ime ka nke ahụ doo anya na post m. IMO, ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ na mbọ mmekọrịta gị, ọ na-eme ka ọkwa ahụ sie ike karị. IMO ị ga-abụ ọkachamara na ha abụọ.
Jenụwarị 9, 2015, elekere 1:51 nke abalị
Ọfọn, ị bụ n'ezie onye nchịkwa clickbait 🙂
Jenụwarị 9, 2015, elekere 4:35 nke abalị
N'eziokwu abụghị ihe mgbaru ọsọ m, mana m ga-ewere ya!